Maqaalka Josie Scotchmer ee Martech Zone |
Maqaallada by Josie Scotchmer
Josie Scotchmer waa Maamulaha Suuqgeynta ee Mailjet, suuq geyn emayl Iyo istiraatiijiyad email. Josie waa Maareeyaha Suuqgeynta B2B2C oo xamaasad badan lehna qaab ganacsi ee isgaarsiinta suuqgeynta.
Sabtida, Oktoobar 28, 2017 Sabtida, Oktoobar 28, 2017 Josie Scotchmer
Maalin ku qaad inaad ku dhex wareegto London, New York, Paris ama Barcelona, ​​xaqiiqdii, magaalo kasta, waxaadna haysan doontaa sabab aad ku aaminto haddii aadan ku wadaagin baraha bulshada, taasi ma dhicin. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha UK iyo Faransiiska waxay hadda tilmaamayaan mustaqbal ka duwan warbaahinta bulshada gebi ahaanba. Cilmi baaris ayaa muujineysa rajooyin mugdi ah oo ku saabsan kanaalada warbaahinta bulshada maadaama kaliya 14% macaamiisha ay kalsooni ku qabaan in Snapchat uu wali jiri doono toban sano.